maal-crypto Japanese ilaa laga yaabaa in ay 55% canshuur macaashka - Blockchain News
Hey'adda canshuuraha Qaranka Japan ayaa garoomada ka sanadkii la soo dhaafay in guulaha caasimada on Xirfado cryptocurrency waa nooc ka mid ah “dakhliga kala duduwan,” maal ayaa hadda laga rabaa inuu caddeeyo faa'iidada ay diiwaan gelintii canshuurta sanadlaha ah sabab Feb. 16-March 15.
Si ka duwan guuleystayna on kaydka iyo lacagaha shisheeye, kuwaas oo ku dhawaad ​​cashuuray 20 boqolkiiba, levy Japan ayaa ka lacag dalwaddii on faa'iidada laga bilaabo 15 boqolkiiba 55 boqolkiiba. Qadarka ugu sareeya khuseysaa dadka qaba dakhliga sanadlaha ah ee 40 milyan oo yen ($365,000).
Iyada oo aan lahayn caasimada guulaha canshuur maalgelinta mudada dheer ee lacag dalwaddii in maamulada qaar ka mid ah oo ay ku jiraan Singapore, haystaa sacab muggiis oo maal-cryptocurrency-hodan horay u tagay Japan, ayaa sheegay in Kengo Maekawa, maamulka sare ee Shiodome Partners Tax Corp.
ka iman kara dakhliga-korinta dowladda Japan ay noqon kartaa muhiim ah. Bilihii ugu danbeeyay ku saabsan 40 boqolkiiba ganacsiga oo dhan Seeraar ayaa ka dhanka ah yen ah.
Dhanka, Hay'adda cashuurta waa in la abuuro saldhig xog ku saabsan maal-cryptocurrency iyo kooxaha ku dhisan ee Tokyo iyo Osaka a yihiin dayactirka a watch dhow ganacsiga elektarooniga ah.
EU bilaabay Blockcha ...
Post Previous:Wasiirka Maaliyada Thailand ee: Dowladda ma mamnuuci doonaa ganacsiga cryptocurrency
Post Next:sarrifka Cryptocurrency BitGrail dhawaaqay muranada ka dib markii hack